I-WordPress Plugin: Ngena kalula ngeTeleport
NgoLwesibili, Agasti 21, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Wake wafuna ukuhlela ikhasi noma ukuthumela ku-WordPress futhi wakhungatheka ngokungakwazi ukusesha nokuthola okuthunyelwe? Kuthiwani ngokwazi nje ukwengeza okuthunyelwe okusha kalula? Kuthiwani ngokwazi nje ukuthola ikhasi lokungena ngemvume kalula? DK New MediaUmthuthukisi omangalisayo, uStephen Coley, ekugcineni unikeze impendulo yokuthi wonke umsebenzisi we-WordPress uzofuna… I-Teleport.
I-Teleport imenyu epholile ephansi yebhulogi lakho le-WordPress elizenzele lona eliqhamuka lapho ufuna ukuthi limane ngokuchofoza u- “w”. Ezinye izinqamuleli zekhibhodi zifaka:
e - (Hlela) Hlela okuthunyelwe / ikhasi kwamanje
d - (Ideshibhodi) Iqondisa kabusha kudeshibhodi
s - (Izilungiselelo) Iqondisa kabusha ekhasini lezilungiselelo
a - (Ingobo yomlando) Iqondisa kabusha kokuthunyelwe / amakhasi / izinhlobo zeposi ngokwezifiso
q - (Quit) Ugxuma umsebenzisi wamanje aphume / Aqondise kabusha ekhasini le-Log In
w - Vula noma Vala Teleporter
esc - Kuvalwa i-Teleporter
Ngakho-ke, uma ubona i-typo kwelinye lamakhasi akho… mane uchofoze u- “w” kulandele u- “e” no-voila! Uthunyelwe ngocingo ngqo kusihleli lapho ungalungisa khona okuthunyelwe bese ukushicilela ngokushesha. Nasi ukubuka konke kwevidiyo ukuthi kanjani I-Teleport iyasebenza:
UStephen unezinye izici ezengeziwe ezizayo… kepha lokhu sekuvele kuyi-plugin emangalisayo yanoma imuphi umsebenzisi we-WordPress!
Tags: stephen coleyTeleportI-wordpress loginimenyu yokungena ngemvume ye-wordpressplugin wordpressizinqamuleli ze-wordpress
Abathengisi Bayisebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana?
Aug 21, 2012 ku-9: 02 AM
Lokhu kuhle, ngiyangeza khona manjalo !!